सुनसान पाल्पा दरबार- प्रदेश ५ - कान्तिपुर समाचार
साढे ६ करोड रपैयाँ खर्चिएर पुनर्निर्माण गरिएको दरबारलाई प्रदेश संग्रहालय घोषणा गरिए पनि पहिलेजस्तो चहलपहल छैन
माघ १०, २०७६ माधव अर्याल
(पाल्पा) — तानसेनका ८७ वर्षीय सूर्यरत्न राजभण्डारीको घरअगाडि पाल्पा दरबार छ । सानो हुँदा दरबार क्षेत्रमा चहलपहल हुन्थ्यो । दरबारमा विभिन्न सरकारी कार्यालय सञ्चालन भएकाले सर्वसाधारणको भीड लाग्थ्यो । दरबार अवलोकन गर्न मुलुकका विभिन्न क्षेत्रबाट दिनहुँ सर्वसाधारण आउँथे ।
दरबार सदरमुकामको गहना बनेको थियो । अहिले दरबार क्षेत्र सुनसान हुन्छ । ‘राणाले तानसेन चम्काएका हुन्,’ उनले भने, ‘यही दरबारबाट पश्चिम नेपालमा शासन चलाएका थिए ।’ सधैंजसो चहलपहल हुने दरबार क्षेत्र अहिले सुनसान बनेको उनले बताए ।
मुलुकमा ००७ सालको क्रान्तिपछि केही समय चहलपहल थिएन । ०१५ सालमा तत्कालीन राजा महेन्द्रको आदेशमा साबिक नगरपालिका, जिविस, प्रशासन, अदालत, मालपोत सबै कार्यालय दरबारबाट सञ्चालन भए । ‘त्यसपछि भीडभाड हुन थाल्यो,’ उनले भने, ‘अहिले दरबारबाट काम नहुँदा सुनसान बनेको हो ।’ अहिले भवनमा पाल्पा दरबार संग्रहालयको बोर्ड झुन्डियाइएको छ । भवनभित्र ऐतिहासिक र पुरातात्त्विक वस्तुको संग्रह नभएकाले बोर्ड हेरेर अवलोकन गर्न आउने झोक्किँदै फर्किने गरेका छन् । ०६२ माघमा तत्कालीन विद्रोही माओवादीको आक्रमणबाट दरबार ध्वस्त भयो । अहिले दरबार पुनःनिर्माण गरिएको छ ।
स्थानीय ८९ वर्षीय चिनियाँलाल श्रेष्ठको अनुभव पनि उस्तै छ । दरबारको चहलपहल ब्यूँताउनुपर्नेमा उनी जोड दिन्छन् । ‘हिजोको अवस्था फरक थियो,’ उनले भने, ‘अहिले दरबारै फरक भइसक्यो । तैपनि, इतिहासलाई जोगाएर पर्यटक तान्नु पर्छ ।’ पछिल्लो समय सर्वपक्षीय माग ‘पाल्पा दरबार संग्रहालय’ बनाउनु पर्ने थियो । राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि, बुद्धिजीवी, सरोकारवाला निकाय, नागरिक अगुवाले कार्यालयको साटो दरबारमा संग्रहालय बनाउनु पर्ने दबाब दिइरहेका छन् ।
दरबार क्षेत्र साँघुरिएर एउटा भवनमा सीमित भएपछि समस्या बढेको छ । भवनको उत्तरतर्फ जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, बाल संगठन (बाल मन्दिर), मातपोत कार्यालयका कर्मचारीको निवास, नेपाली सेनाको जग्गा रहेको छ । ‘यी कार्यालय अन्यत्र व्यवस्थापन गरेर संग्रहालय परिसर बनाउनु पर्छ भन्ने माग हाम्रो छ,’ नेकपा जिल्ला अध्यक्ष तथा प्रदेश सांसद नारायण आचार्यले भने, ‘यसका लागि कहाँ के कस्तो सहयोग गर्नुपर्छ, हामी तयार छौं ।’
दरबारको पश्चिमतर्फ विद्युत् प्राधिकरण, टेलिकमको कार्यालय छ । दक्षिणतर्फ जिल्ला प्रहरी र जिल्ला प्रशासनको भवन छ । दरबारको उत्तरपट्टि राष्ट्रिय अनुसन्धान कार्यालय भवन निर्माण भइरहेको छ । नेपाली सेनाले निसान घर निर्माण गरिरहेको छ । कांग्रेस जिल्ला सभापति वीरबहादुर रानाले दरबारलाई संग्रहालयका रूपमा विकास गर्न आवश्यक काम अगाडि बढाउनु पर्ने बताए । ‘तत्काल डीपीआर तयार गरेर काम अगाडि बढाउन सक्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘यसबाट पाल्पाको पर्यटन विकासमा सहयोग पुग्ने गरी काम गर्नुपर्छ ।’ दरबार परिसरमा अन्धाधुन्ध पक्की संरचनाका भवन निर्माण गर्ने क्रम बढ्दै गएको छ ।
दरबारको जग्गामा कुनै पनि नयाँ संरचना बनाउन दिन नहुने यहाँका अगुवाको माग छ । दरबारलाई प्रदेशको एकमात्र संग्रहालय भन्ने तर जथाभावी रूपमा स्थायी संरचना निर्माण गर्न नुहने सुझाव प्रदेश सभा सदस्य डा. पुरनमान बज्राचार्यको छ । दरबारलाई सवारी साधन पार्किङ स्थल बनाउने, विभिन्न निर्माण सामग्री संग्रह स्थल बनाउँदै लगेकामा उनले चिन्ता व्यक्त गरे । संग्रहालयभित्र कुनै सामग्री राखिएको छैन । दरबारबारे सुनेर मुलुकका विभिन्न स्थानबाट सर्वसाधारण अवलोकनको लागि यहाँ आउने गरेका छन् । उनीहरू दरबारमा पुगेर रित्तो भवन हेरेर फर्किन वाध्य छन् ।
तत्कालीन माओवादी आक्रमणबाट ध्वस्त दरबारका पुरातात्त्विक, ऐतिहासिकता र कलाकौशललाई कतै नबिगारीकन पुनःनिर्माण गरिएको छ । काठैकाठ र इँटाबाट निर्माणाधीन दरबारलाई पुरानै स्वरूपमा ढालिएको स्थानीय राजेन्द्रगोपाल सिंहले बताए । साढे ६ करोड रुपैयाँ खर्च गरेर पुनः निर्माण गरिएको हो । चुना, सुर्की र गिट्टी मिसाएर ढलान गरिएको छ । पुराना इँटा पिसिएको सुर्की र चुना मिसाएर जडान गरिएको उनले बताए । दरबार चार तले छ । ६३ वटा कोठा, दुईवटा बुर्जा र दुईवटा बैठक हल रहेका छन् । दरबार कार्यालय मैत्री बनाउने भन्दा पनि पुरानै ढाँचाले पुनःनिर्माण गरिएको छ । ‘धेरैले बन्दैन होला भन्ने आशंका गरेका हुन्,’ सिंहले भने, ‘निर्माण भएको छ ।
यसबाट फाइदा लिनुपर्छ ।’ प्रशासनिक तथा सांस्कृतिक धरोहर ध्वस्त भएपछि स्थानीय दुःखी बनेका थिए । सरकारले पुनःनिर्माण गर्ने निर्णय गरेपछि खुसीयाली छाएको थियो । ०६४ असार अन्तिममा सुरु गरेर ०७० भदौमा निर्माण सकिएको थियो । पुनःनिर्माणपश्चात् दरबार अवलोकन गर्न आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक आइरहेका छन् । दरबार आफैंमा एउटा स्मारक बनेको स्थानीय बुद्धिजीवी बुद्धिप्रसाद शर्माले बताए । यहाँ आयोजित सर्वपक्षीय छलफलबाट संग्रहालय बनाउने निर्णय गरिएको थियो । सरकारले ०७० माघ ३ गते ‘पाल्पा दरबार संग्रहालय’को कार्यालय स्थापना गर्ने घोषणा गरेको थियो । संग्रहालय व्यवस्थापनको काम अगाडि बढाएको छ । त्यसले तीव्रता लिन नसक्दा सरोकारवाला निराश बनेका छन् ।
अहिले प्रदेश ५ सरकार मातहत संग्रहालय छ । बहुउद्देश्यीय संग्रहालय हुने भएकाले ऐतिहासिक पुरातात्त्विक, सांस्कृतिक तथा विविध महत्त्व झल्कने सम्पदाको नमुना र अभिलेख संग्रह गरिनु पर्ने राष्ट्रिय जनमोर्चाका जिल्ला अध्यक्ष विशाल दर्लामीको सुझाव छ । विशेष गरेर संग्रहालयमा पाल्पाको इतिहास तथा विभिन्न जातजातिको मानव निर्मित तथा प्राकृतिक सम्पदाको प्रतिरूप (नमुना) राख्न उनको सुझाव छ । साथमा तस्बिरहरू, शीलापत्र, ताम्रपत्र रहनुपर्ने उनले बताए ।
संग्रहालयमा धेरै वर्ष काम गरेका यातायात व्यवस्था कार्यालयका अधिकृत विष्णु खनाल अब राप्ती, लुम्बिनी, गण्डकी क्षेत्रको सम्पदालाई संग्रहालयले समेट्नुपर्ने सुझाव दिन्छन् । यस क्षेत्रका थारु, मगर, ब्राह्मण नेवार तथा अन्य जातजातिको परम्परागत भेषभूषा, कलाकौशल राख्नुपर्ने उनले सुझाव दिए । ‘कति कोठा र कुन कोठा कुन जिल्लालाई भन्ने कुराको निर्क्योल हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि त्यसलाई सोही अनुसारको सामान संकलनमा लाग्नुपर्छ ।’ पाल्पाको पाल्पाली ढाका बुनाइ, पाल्पाली करुवा निर्माणका प्रक्रियासमेत संग्रहालयमा रहनुपर्छ ।
जग्गा व्यवस्थापनको खाँचो
दरबारले करिब ५० रोपनी जमिन ओगटेको छ । त्यही जग्गामा अहिले धमाधम सरकारी कार्यालय बनिरहेका छन् । प्रशासन, प्रहरी, अनुसन्धान, विद्युत्, बालमन्दिर, जिल्ला समन्वय, नेपाली सेनाको निसान घर, नेपाल टेलिकम लगायत कार्यालय दरबार परिसरमै छन् । धेरैपटक सर्वदलीय/सर्वपक्षीय भेला/बैठक बसे पनि जग्गाका सन्दर्भमा अहिलेसम्म कुनै निष्कर्ष निस्केको छैन । दरबार वरपरको क्षेत्र समेटेर संग्रहालय परिसर बनाउने दबाव पनि छ । तर, कार्यालय व्यवस्थापन गर्न कसैले पनि अगुवाइ गरेको छैन ।
दरबार क्षेत्र (कित्ता नम्बर १८३ तीन साँचा १ रोपनी ६ आना, कित्ता नम्बर १९८ पुरानो कर कार्यालय ८ रोपनी २ दाम, कित्ता नम्बर १९९ टेलिफोन ४ रोपनी, कित्ता नम्बर २०० दरबार ७ रोपनी १४ आना २ पैसा १ दाम जग्गा रहेको छ । कित्ता नम्बर २०१ बाल मन्दिर ५ रोपनी ८ आना २ पैसा १ दाम, कित्ता नम्बर २०३ सिलखान ५ रोपनी ९ आना १ पैसा १ दाम, कित्ता नम्बर १८७ विद्युत् ७ रोपनी ८ आना ३ पैसा, कित्ता नम्बर ? निसान थान ३ रोपनी २ आना ३ पैसा १ दाम)मा पुनःनिर्माण गरिएको पाल्पा दरबारको कसरी सदुपयोग गर्ने भन्ने कुरा उठिरहेको छ ।
प्रतापशमशेरले विक्रम संवत् १९८१ मा तानसेन दरबारको पुनःनिर्माण गरेका थिए । त्यसअघि बद्रीनरसिंहले निर्माण गरे पनि अलपत्र थियो । त्यसबेलामा यसको वरपर रणउजीरेश्वरी भगवती मन्दिरबाहेक संरचना थिएन । ०१५ सालसम्म पनि यस्तै अवस्था थियो । त्यसपछि वरपर संरचना थपिन थाले ।
दरबार निर्माणको बेग्लै इतिहास रहेको इतिहासविज्ञ निर्मल श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार जंगबहादुर राणाका भाई बद्रीनरसिंहले वि.सं. १९१०–१९३० को अवधिमा यसको पहिलोपटक निर्माण गरेका हुन् । त्यसपछि प्रयोगमा नआउँदा जीर्ण भई भत्कने अवस्थामा पुगेको थियो । तत्कालीन जनरल प्रतापशमशेर पाल्पा तैनाथवाला भएर आए । त्यसपछि पहिलेको भवन भत्काएर अहिलेको दरबारको स्वरूपमा १९८०–८१ मा निर्माण गरेका हुन् । दरबारलाई त्यसबेला प्रशासनिक मुख्यालयको रूपमा प्रयोगमा ल्याइएको थियो ।
यही दरबार ००७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापनापछि पनि जिल्लाको प्रशासनिक भवनका रूपमा कायम रहेको इतिहास उनले सुनाए । जिल्लाको सिंहदरबारका रूपमा उपयोग गरिएको थियो । ‘धेरैजसो मुख्य कार्यालय यहीँ राख्दा जनताले पनि सहजता महसुस गरेका थिए,’ इतिहासविद् श्रेष्ठले भने, ‘०६२ सालमा तत्कालीन विद्रोही माओवादीको आक्रमणपछि भने अहिले दरबार स्रगहालय बन्ने तरखरमा छ । पहिला रहेका कार्यालयहरू बाहिर सरेका छन् ।’
प्रकाशित : माघ १०, २०७६ ०९:२२
इमरानले फेरि गरे भाजपा र नाजी पार्टीको तुलना
डाभोस — पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानले फेरि एक पटक भारतीय जनता पार्टी(भाजपा) नेतृत्वको सरकार हिटरलको नाजी पार्टीको प्रेरणामा चलेको आरोप बताएका छन् । स्विजरल्याण्डको डाभोसमा वर्ल्ड इकानोमिक फोरमका सहभागी हुने क्रममा बीबीसी संवाददातालाई अन्तर्वार्ता दिने क्रममा इमरानले भाजपा र राष्ट्रिय स्वयम् सेवक संघ(आरएसएस) को विचारधारा हिटलरको नाजी पार्टीसँग मिल्ने बताएका हुन् ।
कश्मीर प्रकरणमा भारत सरकारको व्यवहार नाजी पार्टीले म्युनिखमा गरेजस्तै भएको बताउँदै उनले भने, ‘भारतीय शासन अहिले पनि अतिवादी विचारधाराबाट चलिरहेको छ। जसको नाम हो आरएसएस। सन् १९२५ मा नाजी पार्टीको प्रेरणामा आरएसएसको स्थापना भएको थियो।’
उनले वर्तमान भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी आरएसएसको आजीवन सदस्य भएको बताए। उनले कश्मीरको विशेष राज्यको दर्जा खोसिएपछि ५ महिनादेखि ८० लाख मानिस जेलमा जस्तै बस्न बाध्य भएको आरोप पनि लगाए।
भारत–पाकिस्तान विवाद र कश्मीर समस्या समाधानका लागि संयुक्त राष्ट्र संघ वा अमेरिका जस्ता शक्तिले दबाब नदिई यो मुद्दा नसुल्झिने पनि उनले बताए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भारत–पाकिस्तान शान्ति वार्ताका लागि मध्यस्तकर्ता बन्न आफू तयार रहेको पनि इमरानले बताए।
उनले अमेरिका–इरान तनाव बढ्दै जाँदा विकासशील अर्थव्यवस्थामा नराम्रो असर पुर्‍याउने पनि बताए। कुनै प्रकारको लडाइँ भएमा पाकिस्तानको मात्रै होइन, पुरै विश्वअर्थतन्त्र नै डामाडोल हुने इमरानले बताए।
प्रकाशित : माघ १०, २०७६ ०९:१९